ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်၊ လင်းနို့ နှင့် ကူးစက်မှု
မြန်မာနိုင်ငံမှာ နောက်ဆုံးရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တဲ့ လင်းနို့မျိုးဆက်သစ် ခြောက်မျိုးက ဗိုင်းရပ်စ်တွေဟာ လူကိုကူးစက်ရောဂါပေးနိုင်တဲ့ အခြေအနေ မရှိသေးဘူးလို့ မြန်မာ့တောရိုင်းတိရိစ္ဆာန်တွေကနေ လူတွေကို ကူးစက်နိုင်တဲ့ ရောဂါတွေအကြောင်း လေ့လာနေတဲ့ ဒေါက်တာအောင်သန်းတိုးက ပြောပါတယ်။ လင်းနို့နဲ့ တခြားတောရိုင်းသတ္တဝါတွေမှာ တွေ့ရလေ့ရှိတဲ့ ဗိုင်းရပ်စ်တွေနဲ့ လက်ရှိကမ္ဘာတလွှားကူးစက်ပျံ့ နှံ့နေတဲ့ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ဘယ်လိုကွာသလဲဆိုတာကို သိရအောင် Online ကနေ ဆက်သွယ်မေးမြန်းထားပါတယ်။
မေး ။ ။ ဒေါက်တာအောင်သန်းတိုးကို ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။ အခုလိုမျိုး VOA မှာ ဖြေကြားပေးတဲ့အတွက်။ ပထမဦးဆုံး ဒေါက်တာအောင်သန်းတိုိးက တောရိုင်းတိရစ္ဆာန်ကနေ လူတွေကို ကူးစက်တတ်တဲ့ ရောဂါတွေအကြောင်း လေ့လာနေတယ်ဆိုတော့ အခု အဲဒီမှာ ဗိုင်းရပ်စ်တွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ နည်းနည်းပြောပြပေးပါ။ အခုဆိုရင် တကမ္ဘာလုံးမှာ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် COVID-19 ရောဂါ ဖြစ်နေတော့ လူတွေက ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ဆိုတာ ဘာလဲဆိုတာကို ပထမဦးဆုံး သိချင်ပါတယ်။ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်အကြောင်းကို ပြောပြပေးပါ။
ဖြေ ။ ။ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကတော့ အရင်ကတည်းက ပျံ့ နေတဲ့ ဗိုင်းရပ်စ်ပါ။ လူတွေမှမဟုတ်ဘူး၊ တိရစ္ဆာန်တွေမှာလည်း ပျံ့ နေခဲ့တယ်။ ဒီဗိုင်းရပ်စ်က အဓိကအားဖြင့် ဝက်၊ ကြောင်တို့မှာ ဖြစ်နေတာ ကြာခဲ့ပြီ။ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ရဲ့  အဓိပ္ပါယ်က Crown virus - သရဖူ ပုံသဏ္ဍာန် - သူ့ရဲ့ အပြင်ဘက်မှာ ဒူးရင်းသီးလို ဆူးချွန်လေးတွေ အများကြီးရှိတယ်။ ဒီဆူးချွန်တွေကနေ လူတွေမှာရှိတဲ့ ACE2 receptor - နှာခေါင်းတွေ၊ အဆုတ်တွေမှာရှိတဲ့ ဆဲလ်ပေါ်မှာရှိတဲ့ receptor လေးတွေနဲ့ သွားချိတ်ပြီးမှ လူတွေရဲ့  ခန္ဓာကိုယ်ထဲကို ဝင်ပြီးတော့ ပြန့်ပွားနိုင်တယ်။ ဆိုတော့ receptor လေးတွေက အရေးကြီးပါတယ်။
မေး ။ ။ သူတို့ရဲ့  လက်ကလေးတွေပေါ့။
ဖြေ ။ ။ ဟုတ်ပါတယ် - သူ့ရဲ့  လက်ကလေးတွေပါ။ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ဆိုရင် ပုံထဲမှာပြထားသလို အယ်လ်ဖာ၊ ဘီတာ၊ ဂါမာ၊ ဒယ်လ်တာ (alpha, beta, gamma, and delta) မျိုးစုံ ရှိပါတယ်။ ကျနော်တို့နဲ့ ဆက်စပ်တဲ့ ဝက်တွေ၊ ကြက်တွေမှာဆိုရင်လဲ ဒီရောဂါတွေ ဖြစ်နေတာပါ။ အခုဖြစ်နေတဲ့ COVID-19 ကတော့ ဘီတာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် (Betacoronaviruses) အမျိုးအစားထဲကပါ။ အယ်လ်ဖာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် (Alphacoronavirus) ကြတော့ အရင်ကတည်းက ရိုးရိုးတုပ်ကွေးလိုပုံစံ ဖြစ်နေတာတွေလည်း ရှိတယ်။ အဲဒီထဲမှာမှ ဘီတာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် အရင်တုန်းကဖြစ်ဖူးတဲ့ ဆားစ် (SARS) ရှိတယ်။ ဆားစ်က ၂၀၀၃ ခုနှစ်က ဖြစ်ခဲ့တယ်။ ပြီးတော့ မားစ် (MARS) ဆိုပြီး ကုလားအုပ်ကနေတဆင့်ဖြစ်တဲ့ ၂၀၁၂ တုန်းကပါ။ အခု ၂၀၁၉ မှာ ဖြစ်တာကတော့ ကျနော်တို့ မသေချာသေးတာက လင်းနို့က လာတယ်လို့တော့ အဓိကဖြစ်နိုင်တယ်။ လင်းနို့မှာ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်တော့ တွေ့တယ်။ ဒါပေမဲ့ လင်းနို့ကတဆင့် ကြားခံသတ္တဝါ Resevoir ရှိအုံးမယ်။ အဲဒီသတ္တဝါကတော့ ဘာဖြစ်မလဲဆိုတာတော့ မသိသေးပါဘူး။ အဲဒါကို လေ့လာစမ်းသပ်နေတုန်းပါပဲ။
ဆိုတော့ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်အနေနဲ့က သူတို့အနေနဲ့ အယ်လ်ဖာ၊ ဘီတာ၊ ဂါမာ၊ ဒယ်လ်တာ ဆိုပြီး မျိုးစုံရှိတယ်။ ကျနော် အခုနပြောတာ အဓိက ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်အနေနဲ့ လင်းနို့၊ ငှက်တို့ကနေ ရောဂါတွေ ပျံ့ ပွားတယ်။ ကျနော်တို့နဲ့ အဓိကဆက်သွယ်နေတာကတော့ အယ်လ်ဖာ နဲ့ ဘီတာ ဗိုင်းရပ်စ်တွေပါ။ လင်းနို့ကနေတဆင့် ကြားခံသတ္တဝါတခုခု ရှိအုံးမယ်။ အဲဒါကနေ လူတွေဆီ ကူးလာတာပါ။ လူတွေမှ မဟုတ်ပါဘူး၊ ကျနော်တို့နဲ့ ဆွေမျိုးနီးစပ်တဲ့ မျောက်တွေ ဘာတွေကိုလည်း ဒီရောဂါက ကူးစက်ပျံ့ ပွားနိုင်ပါတယ်။ အခု ကျနော်တို့ တွေ့နေတဲ့ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်က သင်းခွေချပ် (Pangolin) မှာတွေ့တဲ့ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်နဲ့ တော်တော်ဆင်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ Pangolin သင်းခွေချပ်ကိုစားလို့ ဒါဖြစ်လားဆိုတာကိုတော့ တပ်အပ်မပြောနိုင်သေးပါဘူး။ မြွေမှာတွေ့တဲ့ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်မှာ လင်းနို့ကနေတဆင့် ကူးလာနိုင်တယ်။ လင်းနို့ကကူးတာ အယ်လ်ဖာ နဲ့ ဘီတာမှာ ကူးတယ်။ အခု ဘီတာမှာတော့ လင်းနို့ကနေတဆင့် ကြားခံနယ် ရှိမယ်။ ကြားခံနယ်မှာမှ လူတွေမဟုတ်ပါဘူး၊ ဒီကနေ တခြားကြားခံ သတ္တဝါတွေလည်း ရှိတယ်။ အခုဆိုရင် ဘယ်လိုတွေ ပြောနေကြသလဲဆိုတော့ တချို့ ကတော့ သင်းခွေချပ်က ကြားခံနယ် ဖြစ်မယ်လို့ ပြောတယ်။ အဓိကပြောရတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်က သင်းခွေချပ်မှာ တွေ့ရတဲ့ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်က အခုတွေ့တဲ့ ကိုဗစ်-၁၉ နဲ့ဆိုရင် Genome Level မှာဆိုရင် (၉၆) ရာခိုင်နှုန်းအထိ ဆင်တယ်။ ဒါပေမဲ့ သင်းခွေချပ်ဗိုင်းရပ်စ်မှာ ဆိုရင်လဲ တတ်အပ်မပြောနိုင်သေးဘူး။ မြွေမှာတွေ့တဲ့ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကလဲ လူတွေမှာဖြစ်နေတဲ့ ကိုဗစ်-၁၉ နဲ့လည်း ဆင်တယ်။ ဒါပေမဲ့ ဆင်တာပဲ ရှိသေးတယ်။ မြွေကနေတဆင့် ကြားခံနယ်အဖြစ် ကူးတယ်လို့တော့ ပြောလို့မရသေးပါဘူး။
ကျနော်တို့ ဒီမှာပြထားတဲ့ ဒယ်လ်တာကိုဗစ်ကတော့ (၉၆) ရာခိုင်နှုန်း တူတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကျနော်တို့မှာ ဖြစ်နေတဲ့ ကိုဗစ်ရောဂါလားဆိုတော့ မဟုတ်သေးပါဘူး။ ဒီဟာကတော့ တခြားနိုင်ငံမှာ တွေ့ဖူးတဲ့ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် အမျိုးအစားပါ။
မေး ။ ။ ဆိုတော့ အခု လင်းနို့မှာတွေ့ရတဲ့ ဗိုင်းရပ်စ်နဲ့ ကိုဗစ်-၁၉ ဖြစ်နေတာနဲ့ သိပ်မတူသေးဘူးပေါ့။ တူတယ်လို့ မပြောနိုင်သေးဘူးပေါ့။
ဖြေ ။ ။ (၉၆) ရာခိုင်နှုန်း အနီးဆုံးတူတဲ့ Bat Covid …. ကတော့ (၉၆) ရာခိုင်နှုန်းတူတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဒီကောင်ပဲလဲဆိုတော့လဲ မဟုတ်သေးဘူး။
မေး ။ ။ တိုက်ရိုက်ပြောလို့ မရသေးဘူးပေါ့။ လင်းနို့မှာတွေ့တဲ့ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် တွေ့တယ်ဆိုတော့ မြန်မာနိုင်ငံမှာလဲ လင်းနို့ကနေ မျိုးစေ့သစ် (၆) ခု တွေ့တယ်လို့ ပြောပါတယ်။ ဒါနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ နည်းနည်းလေး ရှင်းပြပေးပါ။
ဖြေ ။ ။ Project အကြောင်း ပြောရရင် Predict project ပါ။ Predict အဓိပ္ပါယ်က ရောဂါအသစ်တွေကို ကြိုတင်ခန့်မှန်းတာ။ အဓိက အမေရိကန်အစိုးရက Funding လုပ်ပေးတဲ့ project မျိုး။ ၂၀၁၅ ကနေစတယ်။ ၂၀၂၀ အထိ (၅) နှစ်တာကာလ လုပ်ပါတယ်။ အဲဒီမှာ ရှာဖွေတာကတော့ ဖားအံက ဂူတွေ၊ ရန်ကုန်က လှော်ကားမှာပါ။ ဖားအံက ဂူတွေမှာ အဓိကတွေ့တာကတော့ ဗိုင်းရပ်စ်အသစ်တွေကို တွေ့ပါတယ်။ ဒီဗိုင်းရပ်စ်အသစ် (၆) မျိုးကတော့ မြန်မာပြည်အနေနဲ့ ကမ္ဘာအနေနဲ့ First time တွေ့တာ။ ကမ္ဘာပေါ်မှာ ပထမအကြိမ်တွေ့တာ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်က (၄) မျိုးပါ။ နောက်ထပ် (၂) မျိုးကတော့ တခြားနိုင်ငံတွေမှာ တွေ့ထားပြီးပါပြီ။ စုစုပေါင်း (၆) မျိုးပါ။
မေး ။ ။ အခု အသစ်တွေ့တဲ့ (၆) ခုထဲက လူတွေအတွက်ကို အန္တရာယ်ရှိနိုင်တဲ့ ဗိုင်းရပ်စ်မျိုးများ အဲဒီအထဲမှာ ပါသလား။
ဖြေ ။ ။ အခု (၆) ခုလုံးကို စမ်းသပ်ကြည့်တယ်။ Genome Level ကိုလည်း စစ်တယ်။ တခြားစမ်းသပ်မှုတွေ ပြီးတဲ့အခါ လောလောဆယ်တော့ ဒီ (၆) ခုလုံးကတော့ အခုလောလောဆယ်အချိန်မှာတော့ ကူးစက်နိုင်တဲ့၊ ရောဂါပေးနိုင်တဲ့ အခြေအနေတော့ မရှိသေးပါဘူး။ ဒီရောဂါစစ်တဲ့ ကျနော်တို့ Project လုပ်တဲ့အချိန်မှာ တောရိုင်းတိရစ္ဆာန်တွေကိုပဲ sample စစ်တာ မဟုတ်ပါဘူး။ ကျနော်တို့ လူတွေကိုလည်း စစ်တယ်။ ဥပမာ ဖားအံမှာဆိုရင် လင်းနို့ဂူဆိုတာ ရှိတယ်။ အဲဒီမှာ သန်းချီတဲ့ လင်းနို့တွေရှိတယ်။ ဒီလင်းနို့ဂူထဲကို ဝင်ပြီးတော့ လင်းနို့ချေးကောက်တဲ့ အလုပ်သမားတွေလည်း ရှိတယ်။ ဒီအလုပ်သမားတွေကို စစ်သလို၊ သူတို့ရဲ့ မိသားစုတွေကိုပါ စစ်ပါတယ်။ စစ်တဲ့အချိန်မှာ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ခံစားရတာကို မတွေ့ဘူး။ သူတို့တွေ ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်က ဖျားဖူးလားမေးတော့ ဖျားဖူးတယ်။ ဒါပေမယ့် ရိုးရိုးတုတ်ကွေးရောဂါနဲ့ ဖျားဖူးတာပဲ တွေ့ရှိပါတယ်။
မေး ။ ။ ဆိုတော့ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်က တောရိုင်းတိရစ္ဆာန်တွေကနေ လူတွေကို လိုက်ကူးနိုင်တယ်ဆိုတော့ ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ တောရိုင်းတိရစ္ဆာန်တွေနဲ့ ထိတွေ့နေတဲ့ လူတွေအများကြီး။ အခုထက်ထိလဲ အစားအသောက်တွေကို အသက်ရှင်လျက်ရှိတဲ့ အကောင်တွေကို ရောင်းချနေတာတွေလဲ တားမြစ်တာ မရှိပါဘူး။ ဆိုတော့ အဲဒီအန္တရာယ်လေး နည်းနည်းပြောပြပေးပါ။
ဖြေ ။ ။ အဓိက မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဒေသတော်တော်များများမှာ တချို့ နေရာတွေကြတော့ ပုံမှန် ကြက်တွေ၊ ဝက်တွေရဖို့ ရှားတာတပိုင်း၊ ပြီးတော့ တချို့ ကြတော့ မိရိုးဖလာအတိုင်း စားသောက်ကြတာတပိုင်း။ အဲဒီမှာ ဘာဖြစ်နိုင်လဲဆိုတော့ အခု ဗိုင်းရပ်စ်တွေ ဖြစ်လာတဲ့ တောက်လျှောက်က ကူးတာနဲ့ ရောဂါအကြီးကြီးထဖြစ်မှာ မဟုတ်ဘူး။ နေရာရယ်၊ အချိန်ရယ်၊ ကြားခံရယ် အကုန်လုံး Right time, Right place, Right person အားလုံးစုံညီသွားမှပဲ ရောဂါက ဗိုင်းရပ်စ်က ပုံစံပြောင်းပြီး mutate ဖြစ်ပြီးတော့ အခုလို ကပ်ရောဂါ ဖြစ်လာနိုင်တာပါ။ အဓိက စားသောက်ရုံနဲ့လဲ မဖြစ်နိုင်သေးဘူး။ စားသောက်တာကို တားရုံနဲ့လဲ မရသေးဘူး။ ကျနော်တို့အနေနဲ့ ecosystem ဂေဟစံနစ်တွေကိုလည်း ထိန်းသိမ်းဖို့ လိုပါတယ်။ ဂေဟစနစ်တွေကို ထိန်းသိမ်းမှာ ဥပမာ တောကောင်က တောထဲမှာ နေပြီးတော့ လူတွေက လူတွေဘက်ခြမ်းမှာ နေမယ်။ မဟုတ်ရင် တောကောင်ကနေ လူတွေဘက်ကို ရောဂါတွေ ကူးသန်းလာနိုင်ပါတယ်။
မေး ။ ။ ဆိုတော့ အဲဒါကို အများကြီး သတိထားရမှာပေါ့။ စောစောက လူတွေကို ကူးဖို့လို့ တဆင့်တဆင့် ပြောင်းလာတယ်ဆိုတာကို နည်းနည်းလေး ရှင်းပြပေးပါ။ ဒီကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ပိုးက ဘယ်လိုမျိုး ကူးလာနိုင်တယ်ဆိုတာ။
ဖြေ ။ ။ အခု လောလောဆယ် ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်အရှေ့မှာ ဖြစ်သွားခဲ့တဲ့ SARS / MARS ဆားစ်၊ မားစ်တို့မှာ လင်းနို့တွေဆီမှာ နဂိုကတည်းက ဗိုင်းရပ်စ် မျိုးစုံ ရှိပြီးသား။ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်အပြင် တခြားဗိုင်းရပ်စ်တွေလည်း ရှိအုံးမယ်။ ဒါပေမယ့် သူတို့ အနေနဲ့က သူတို့ကိုယ် သူတို့ ရောဂါ မဖြစ်စေဘူး။ ဒါပေမဲ့ လင်းနို့တွေကို ဖမ်းပြီးတော့ တောကောင်တွေ ရောင်းတဲ့ နေရာတွေမှာ၊ လင်းနို့တွေအပြင် တခြား တောကောင်တွေ ရှိမယ်။ အရင် SARS ဆားစ် ကိစ္စမှာ အခု လောလောဆယ် အရှေ့မှာ ဖြစ်သွားတဲ့SARS / MARS ဆားစ် ရော မားစ်ရောက ပြောရရင်၊ လင်းနို့တွေမှာက နဂိုကတည်းက ဗိုင်းရပ်စ် မျိုးစုံ ရှိပြီးသား။ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် အပြင် တခြားဗိုင်းရပ်စ်တွေလည်း ရှိအုံးမယ်။ ဒါပေမယ့် သူတို့ အနေနဲ့က သူတို့ကိုယ် သူတို့ ရောဂါမဖြစ်စေဘူး။ ဒါပေမယ့် တောကောင်တွေ ရောင်းတဲ့ နေရာမှာ လင်းနို့အပြင် တခြား တောကောင်တွေ ရှိမယ်။ ဥပမာ SARS ဆားစ် ကိစ္စမှာ ဆိုရင် လင်းနို့ရယ် ကြောင်ကတိုးတို့ကို ထားတယ်။ အဲဒီမှာ လင်းနို့တွေက ဘယ်လို ဖြစ်သလဲဆိုတော့ ပုံမှန်အချိန်မှာဆိုရင် ဒီရောဂါတွေကို မပြန့်ပွါးနိုင်ဘူးဆိုပေမယ့် သူတို့ကို လှောင်အိမ်ထဲမှာ လှောင်ချိုင့်ထဲမှာ ထားတဲ့အချိန်ကျရင် သူတို့က စိတ်ဖိစီးမှု အခု လောလောဆယ် အရှေ့မှာ ဖြစ်သွားတဲ့SARS / MARS ဆားစ် ရော မားစ်ရောက ပြောရရင်၊ လင်းနို့တွေမှာက နဂိုကတည်းက ဗိုင်းရပ်စ် မျိုးစုံ ရှိပြီးသား။ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် အပြင် တခြားဗိုင်းရပ်စ်တွေလည်း ရှိအုံးမယ်။ ဒါပေမယ့် သူတို့ အနေနဲ့က သူတို့ကိုယ် သူတို့ ရောဂါမဖြစ်စေဘူး။ ဒါပေမယ့် တောကောင်တွေ ရောင်းတဲ့ နေရာမှာ လင်းနို့အပြင် တခြား တောကောင်တွေ ရှိမယ်။ ဥပမာ SARS ဆားစ် ကိစ္စမှာ ဆိုရင် လင်းနို့ရယ် ကြောင်ကတိုး ရယ်ကို ထားတယ်။ အဲဒီမှာ လင်းနို့တွေက ဘယ်လို ဖြစ်သလဲ ဆိုတော့ ပုံမှန်အချိန်မှာ ဆိုရင် ဒီရောဂါ တွေကို မပြန့်ပွါးနိုင်ဘူး ဆိုပေမယ့် သူက လှောင်အိမ်ထဲမှာ လှောင်ချိုင့် ထဲမှာ ထားတဲ့အချိန်ကျရင် သူက stress အရမ်းဖြစ်တယ်။ အဲဒီလို stress ဖြစ်တဲ့ အချိန်ကျမှ ဗိုင်းရပ်စ်တွေက တခြားတွေကို ကူးရော၊ ဒီလို ကူးတဲ့အချိန်မှာ ကြောင်ကတိုးနား ထားမိရင် ကြောင်ကတိုးကို ကူးရော။ အဲဒီမှာ အဲဒီ ကြောင်ကတိုးမှာလည်း သူ့ရဲ့ ဇီဝစံနစ် ရှိမယ်။ တိုက်ထုတ်နိုင်တာ ရှိသလို မတိုက်ထုတ်နိုင်တာလည်း ရှိမယ်။ အဲဒီလို ဖျားနေတဲ့ ကြောင်ကတိုးကို ကျနော်တို့က စားမိတဲ့အချိန်မှာ ကျနော်တို့ အဲဒီ SARS ဆားစ် ရောဂါကို စရတာပါ။ ဆိုတော့ သူတို့က ပုံမှန် ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်တွေ ရှိနေရာကနေ ဥပမာ လင်းနို့စားရင် ဒီရောဂါ ဖြစ်မလား လို့မေးရင်တော့ ဖြစ်ချင်လည်း ဖြစ်မယ်၊ မဖြစ်ချင်လည်း မဖြစ်ဖူး။ ကျနော် အခုနက ပြောသလို သင့်တော်တဲ့ အချိန်၊ သင့်တော်တဲ့ နေရာ၊ သင့်တော်တဲ့ ကြားလူ အကုန်လုံး အချိန်ကိုက်ဖြစ်ဖို့လိုပါတယ်။
မေး ။ ။ ဆိုတော့ ဒီလိုမျိုး ရောဂါ တကမ္ဘာလုံး ကြုံနေရတဲ့ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ရောဂါ မကူးစက်အောင် အဓိက ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ ပြောပြပေးပါ။
ဖြေ ။ ။ ကိုဗစ်-၁၉ အနေနဲ့က ရောဂါဆိုတာ စမဖြစ်လာခင်ကနေ ပြောရမယ်ဆိုရင် ဒီရောဂါတွေ မဖြစ်အောင် ကျနော်တို့ လူတိုင်းအနေနဲ့ ဂေဟစနစ်ကို ထိန်းသိမ်းဖို့၊ အစိုးရအနေနဲ့ ပြည်သူလူထုအနေနဲ့ ဝိုင်းဝန်းကူညီဖို့ လိုပါတယ်။ ဒါမှ အခု ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်က ဆေးထွက်လာပြီး ပြီသွားတယ်ဆိုပေမယ့် ပြီးခဲ့တဲ့ ဆယ်စုနှစ်၊ အခုနှစ်ဆယ်ကို ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင် ရောဂါအသစ်အသစ်တွေ ထပ်ထွက်လာတာ ဂေဟစနစ်ပျက်ဆီးမှု၊ တောကောင်စားသုံးမှု ဒီလိုမျိုးစုံကနေ ရောဂါအသစ်အသစ်တွေက ထပ်ထွက်လာတဲ့အတွက် ဂေဟစနစ်ကို အဓိကထိန်းသိမ်းဖို့ လိုပါလိမ့်မယ်။
မွနျမာနိုငျငံမှာ နောကျဆုံးရှာဖှတှေရှေိ့ခဲ့တဲ့ လငျးနို့မြိုးဆကျသဈ ခွောကျမြိုးက ဗိုငျးရပျဈတှဟော လူကိုကူးစကျရောဂါပေးနိုငျတဲ့ အခွအေနေ မရှိသေးဘူးလို့ မွနျမာ့တောရိုငျးတိရိစ်ဆာနျတှကေနေ လူတှကေို ကူးစကျနိုငျတဲ့ ရောဂါတှအေကွောငျး လလေ့ာနတေဲ့ ဒေါကျတာအောငျသနျးတိုးက ပွောပါတယျ။ လငျးနို့နဲ့ တခွားတောရိုငျးသတ်တဝါတှမှော တှရေ့လရှေိ့တဲ့ ဗိုငျးရပျဈတှနေဲ့ လကျရှိကမ်ဘာတလှားကူးစကျပြံ့နှံ့နတေဲ့ ကိုရိုနာဗိုငျးရပျဈ ဘယျလိုကှာသလဲဆိုတာကို သိရအောငျ Online ကနေ ဆကျသှယျမေးမွနျးထားပါတယျ။
မေး ။ ။ ဒေါကျတာအောငျသနျးတိုးကို ကြေးဇူးအမြားကွီးတငျပါတယျ။ အခုလိုမြိုး VOA မှာ ဖွကွေားပေးတဲ့အတှကျ။ ပထမဦးဆုံး ဒေါကျတာအောငျသနျးတိုးက တောရိုငျးတိရစ်ဆာနျကနေ လူတှကေို ကူးစကျတတျတဲ့ ရောဂါတှအေကွောငျး လလေ့ာနတေယျဆိုတော့ အခု အဲဒီမှာ ဗိုငျးရပျဈတှနေဲ့ ပတျသကျပွီးတော့ နညျးနညျးပွောပွပေးပါ။ အခုဆိုရငျ တကမ်ဘာလုံးမှာ ကိုရိုနာဗိုငျးရပျဈ COVID-19 ရောဂါ ဖွဈနတေော့ လူတှကေ ကိုရိုနာဗိုငျးရပျဈဆိုတာ ဘာလဲဆိုတာကို ပထမဦးဆုံး သိခငျြပါတယျ။ ကိုရိုနာဗိုငျးရပျဈအကွောငျးကို ပွောပွပေးပါ။
ဖွေ ။ ။ ကိုရိုနာဗိုငျးရပျဈကတော့ အရငျကတညျးက ပြံ့နတေဲ့ ဗိုငျးရပျဈပါ။ လူတှမှေမဟုတျဘူး၊ တိရစ်ဆာနျတှမှောလညျး ပြံ့နခေဲ့တယျ။ ဒီဗိုငျးရပျဈက အဓိကအားဖွငျ့ ဝကျ၊ ကွောငျတို့မှာ ဖွဈနတော ကွာခဲ့ပွီ။ ကိုရိုနာဗိုငျးရပျဈရဲ့ အဓိပ်ပါယျက Crown virus - သရဖူ ပုံသဏ်ဍာနျ - သူ့ရဲ့အပွငျဘကျမှာ ဒူးရငျးသီးလို ဆူးခြှနျလေးတှေ အမြားကွီးရှိတယျ။ ဒီဆူးခြှနျတှကေနေ လူတှမှောရှိတဲ့ ACE2 receptor - နှာခေါငျးတှေ၊ အဆုတျတှမှောရှိတဲ့ ဆဲလျပျေါမှာရှိတဲ့ receptor လေးတှနေဲ့ သှားခြိတျပွီးမှ လူတှရေဲ့ ခန်ဓာကိုယျထဲကို ဝငျပွီးတော့ ပွနျ့ပှားနိုငျတယျ။ ဆိုတော့ receptor လေးတှကေ အရေးကွီးပါတယျ။
မေး ။ ။ သူတို့ရဲ့ လကျကလေးတှပေေါ့။
ဖွေ ။ ။ ဟုတျပါတယျ - သူ့ရဲ့ လကျကလေးတှပေါ။ ကိုရိုနာဗိုငျးရပျဈဆိုရငျ ပုံထဲမှာပွထားသလို အယျလျဖာ၊ ဘီတာ၊ ဂါမာ၊ ဒယျလျတာ (alpha, beta, gamma, and delta) မြိုးစုံ ရှိပါတယျ။ ကနြျောတို့နဲ့ ဆကျစပျတဲ့ ဝကျတှေ၊ ကွကျတှမှောဆိုရငျလဲ ဒီရောဂါတှေ ဖွဈနတောပါ။ အခုဖွဈနတေဲ့ COVID-19 ကတော့ ဘီတာကိုရိုနာဗိုငျးရပျဈ (Betacoronaviruses) အမြိုးအစားထဲကပါ။ အယျလျဖာကိုရိုနာဗိုငျးရပျဈ (Alphacoronavirus) ကွတော့ အရငျကတညျးက ရိုးရိုးတုပျကှေးလိုပုံစံ ဖွဈနတောတှလေညျး ရှိတယျ။ အဲဒီထဲမှာမှ ဘီတာကိုရိုနာဗိုငျးရပျဈ အရငျတုနျးကဖွဈဖူးတဲ့ ဆားဈ (SARS) ရှိတယျ။ ဆားဈက ၂၀၀၃ ခုနှဈက ဖွဈခဲ့တယျ။ ပွီးတော့ မားဈ (MARS) ဆိုပွီး ကုလားအုပျကနတေဆငျ့ဖွဈတဲ့ ၂၀၁၂ တုနျးကပါ။ အခု ၂၀၁၉ မှာ ဖွဈတာကတော့ ကနြျောတို့ မသခြောသေးတာက လငျးနို့က လာတယျလို့တော့ အဓိကဖွဈနိုငျတယျ။ လငျးနို့မှာ ကိုရိုနာဗိုငျးရပျဈတော့ တှတေ့ယျ။ ဒါပမေဲ့ လငျးနို့ကတဆငျ့ ကွားခံသတ်တဝါ Resevoir ရှိအုံးမယျ။ အဲဒီသတ်တဝါကတော့ ဘာဖွဈမလဲဆိုတာတော့ မသိသေးပါဘူး။ အဲဒါကို လလေ့ာစမျးသပျနတေုနျးပါပဲ။
ဆိုတော့ ကိုရိုနာဗိုငျးရပျဈအနနေဲ့က သူတို့အနနေဲ့ အယျလျဖာ၊ ဘီတာ၊ ဂါမာ၊ ဒယျလျတာ ဆိုပွီး မြိုးစုံရှိတယျ။ ကနြျော အခုနပွောတာ အဓိက ကိုရိုနာဗိုငျးရပျဈအနနေဲ့ လငျးနို့၊ ငှကျတို့ကနေ ရောဂါတှေ ပြံ့ပှားတယျ။ ကနြျောတို့နဲ့ အဓိကဆကျသှယျနတောကတော့ အယျလျဖာ နဲ့ ဘီတာ ဗိုငျးရပျဈတှပေါ။ လငျးနို့ကနတေဆငျ့ ကွားခံသတ်တဝါတခုခု ရှိအုံးမယျ။ အဲဒါကနေ လူတှဆေီ ကူးလာတာပါ။ လူတှမှေ မဟုတျပါဘူး၊ ကနြျောတို့နဲ့ ဆှမြေိုးနီးစပျတဲ့ မြောကျတှေ ဘာတှကေိုလညျး ဒီရောဂါက ကူးစကျပြံ့ပှားနိုငျပါတယျ။ အခု ကနြျောတို့ တှနေ့တေဲ့ ကိုရိုနာဗိုငျးရပျဈက သငျးခှခေပျြ (Pangolin) မှာတှတေဲ့ ကိုရိုနာဗိုငျးရပျဈနဲ့ တျောတျောဆငျပါတယျ။ ဒါပမေဲ့ Pangolin သငျးခှခေပျြကိုစားလို့ ဒါဖွဈလားဆိုတာကိုတော့ တပျအပျမပွောနိုငျသေးပါဘူး။ မွှမှောတှတေဲ့ ကိုရိုနာဗိုငျးရပျဈမှာ လငျးနို့ကနတေဆငျ့ ကူးလာနိုငျတယျ။ လငျးနို့ကကူးတာ အယျလျဖာ နဲ့ ဘီတာမှာ ကူးတယျ။ အခု ဘီတာမှာတော့ လငျးနို့ကနတေဆငျ့ ကွားခံနယျ ရှိမယျ။ ကွားခံနယျမှာမှ လူတှမေဟုတျပါဘူး၊ ဒီကနေ တခွားကွားခံ သတ်တဝါတှလေညျး ရှိတယျ။ အခုဆိုရငျ ဘယျလိုတှေ ပွောနကွေသလဲဆိုတော့ တခြို့ကတော့ သငျးခှခေပျြက ကွားခံနယျ ဖွဈမယျလို့ ပွောတယျ။ အဓိကပွောရတဲ့ ရညျရှယျခကျြက သငျးခှခေပျြမှာ တှရေ့တဲ့ ကိုရိုနာဗိုငျးရပျဈက အခုတှတေဲ့ ကိုဗဈ-၁၉ နဲ့ဆိုရငျ Genome Level မှာဆိုရငျ (၉၆) ရာခိုငျနှုနျးအထိ ဆငျတယျ။ ဒါပမေဲ့ သငျးခှခေပျြဗိုငျးရပျဈမှာ ဆိုရငျလဲ တတျအပျမပွောနိုငျသေးဘူး။ မွှမှောတှတေဲ့ ကိုရိုနာဗိုငျးရပျဈကလဲ လူတှမှောဖွဈနတေဲ့ ကိုဗဈ-၁၉ နဲ့လညျး ဆငျတယျ။ ဒါပမေဲ့ ဆငျတာပဲ ရှိသေးတယျ။ မွှကေနတေဆငျ့ ကွားခံနယျအဖွဈ ကူးတယျလို့တော့ ပွောလို့မရသေးပါဘူး။
ကနြျောတို့ ဒီမှာပွထားတဲ့ ဒယျလျတာကိုဗဈကတော့ (၉၆) ရာခိုငျနှုနျး တူတယျ။ ဒါပမေဲ့ ကနြျောတို့မှာ ဖွဈနတေဲ့ ကိုဗဈရောဂါလားဆိုတော့ မဟုတျသေးပါဘူး။ ဒီဟာကတော့ တခွားနိုငျငံမှာ တှဖေူ့းတဲ့ ကိုရိုနာဗိုငျးရပျဈ အမြိုးအစားပါ။
မေး ။ ။ ဆိုတော့ အခု လငျးနို့မှာတှရေ့တဲ့ ဗိုငျးရပျဈနဲ့ ကိုဗဈ-၁၉ ဖွဈနတောနဲ့ သိပျမတူသေးဘူးပေါ့။ တူတယျလို့ မပွောနိုငျသေးဘူးပေါ့။
ဖွေ ။ ။ (၉၆) ရာခိုငျနှုနျး အနီးဆုံးတူတဲ့ Bat Covid …. ကတော့ (၉၆) ရာခိုငျနှုနျးတူတယျ။ ဒါပမေဲ့ ဒီကောငျပဲလဲဆိုတော့လဲ မဟုတျသေးဘူး။
မေး ။ ။ တိုကျရိုကျပွောလို့ မရသေးဘူးပေါ့။ လငျးနို့မှာတှတေဲ့ ကိုရိုနာဗိုငျးရပျဈ တှတေ့ယျဆိုတော့ မွနျမာနိုငျငံမှာလဲ လငျးနို့ကနေ မြိုးစသေ့ဈ (၆) ခု တှတေ့ယျလို့ ပွောပါတယျ။ ဒါနဲ့ ပတျသကျပွီးတော့ နညျးနညျးလေး ရှငျးပွပေးပါ။
ဖွေ ။ ။ Project အကွောငျး ပွောရရငျ Predict project ပါ။ Predict အဓိပ်ပါယျက ရောဂါအသဈတှကေို ကွိုတငျခနျ့မှနျးတာ။ အဓိက အမရေိကနျအစိုးရက Funding လုပျပေးတဲ့ project မြိုး။ ၂၀၁၅ ကနစေတယျ။ ၂၀၂၀ အထိ (၅) နှဈတာကာလ လုပျပါတယျ။ အဲဒီမှာ ရှာဖှတောကတော့ ဖားအံက ဂူတှေ၊ ရနျကုနျက လှျောကားမှာပါ။ ဖားအံက ဂူတှမှော အဓိကတှတေ့ာကတော့ ဗိုငျးရပျဈအသဈတှကေို တှပေ့ါတယျ။ ဒီဗိုငျးရပျဈအသဈ (၆) မြိုးကတော့ မွနျမာပွညျအနနေဲ့ ကမ်ဘာအနနေဲ့ First time တှတေ့ာ။ ကမ်ဘာပျေါမှာ ပထမအကွိမျတှတေ့ာ ကိုရိုနာဗိုငျးရပျဈက (၄) မြိုးပါ။ နောကျထပျ (၂) မြိုးကတော့ တခွားနိုငျငံတှမှော တှထေ့ားပွီးပါပွီ။ စုစုပေါငျး (၆) မြိုးပါ။
မေး ။ ။ အခု အသဈတှတေဲ့ (၆) ခုထဲက လူတှအေတှကျကို အန်တရာယျရှိနိုငျတဲ့ ဗိုငျးရပျဈမြိုးမြား အဲဒီအထဲမှာ ပါသလား။
ဖွေ ။ ။ အခု (၆) ခုလုံးကို စမျးသပျကွညျ့တယျ။ Genome Level ကိုလညျး စဈတယျ။ တခွားစမျးသပျမှုတှေ ပွီးတဲ့အခါ လောလောဆယျတော့ ဒီ (၆) ခုလုံးကတော့ အခုလောလောဆယျအခြိနျမှာတော့ ကူးစကျနိုငျတဲ့၊ ရောဂါပေးနိုငျတဲ့ အခွအေနတေော့ မရှိသေးပါဘူး။ ဒီရောဂါစဈတဲ့ ကနြျောတို့ Project လုပျတဲ့အခြိနျမှာ တောရိုငျးတိရစ်ဆာနျတှကေိုပဲ sample စဈတာ မဟုတျပါဘူး။ ကနြျောတို့ လူတှကေိုလညျး စဈတယျ။ ဥပမာ ဖားအံမှာဆိုရငျ လငျးနို့ဂူဆိုတာ ရှိတယျ။ အဲဒီမှာ သနျးခြီတဲ့ လငျးနို့တှရှေိတယျ။ ဒီလငျးနို့ဂူထဲကို ဝငျပွီးတော့ လငျးနို့ခြေးကောကျတဲ့ အလုပျသမားတှလေညျး ရှိတယျ။ ဒီအလုပျသမားတှကေို စဈသလို၊ သူတို့ရဲ့ မိသားစုတှကေိုပါ စဈပါတယျ။ စဈတဲ့အခြိနျမှာ ကိုရိုနာဗိုငျးရပျဈ ခံစားရတာကို မတှဘေူ့း။ သူတို့တှေ ပွီးခဲ့တဲ့နှဈက ဖြားဖူးလားမေးတော့ ဖြားဖူးတယျ။ ဒါပမေယျ့ ရိုးရိုးတုတျကှေးရောဂါနဲ့ ဖြားဖူးတာပဲ တှရှေိ့ပါတယျ။
မေး ။ ။ ဆိုတော့ ကိုရိုနာဗိုငျးရပျဈက တောရိုငျးတိရစ်ဆာနျတှကေနေ လူတှကေို လိုကျကူးနိုငျတယျဆိုတော့ ဒါနဲ့ပတျသကျပွီးတော့ မွနျမာနိုငျငံမှာ တောရိုငျးတိရစ်ဆာနျတှနေဲ့ ထိတှနေ့တေဲ့ လူတှအေမြားကွီး။ အခုထကျထိလဲ အစားအသောကျတှကေို အသကျရှငျလကျြရှိတဲ့ အကောငျတှကေို ရောငျးခနြတောတှလေဲ တားမွဈတာ မရှိပါဘူး။ ဆိုတော့ အဲဒီအန်တရာယျလေး နညျးနညျးပွောပွပေးပါ။
ဖွေ ။ ။ အဓိက မွနျမာနိုငျငံမှာ ဒသေတျောတျောမြားမြားမှာ တခြို့နရောတှကွေတော့ ပုံမှနျ ကွကျတှေ၊ ဝကျတှရေဖို့ ရှားတာတပိုငျး၊ ပွီးတော့ တခြို့ကွတော့ မိရိုးဖလာအတိုငျး စားသောကျကွတာတပိုငျး။ အဲဒီမှာ ဘာဖွဈနိုငျလဲဆိုတော့ အခု ဗိုငျးရပျဈတှေ ဖွဈလာတဲ့ တောကျလြှောကျက ကူးတာနဲ့ ရောဂါအကွီးကွီးထဖွဈမှာ မဟုတျဘူး။ နရောရယျ၊ အခြိနျရယျ၊ ကွားခံရယျ အကုနျလုံး Right time, Right place, Right person အားလုံးစုံညီသှားမှပဲ ရောဂါက ဗိုငျးရပျဈက ပုံစံပွောငျးပွီး mutate ဖွဈပွီးတော့ အခုလို ကပျရောဂါ ဖွဈလာနိုငျတာပါ။ အဓိက စားသောကျရုံနဲ့လဲ မဖွဈနိုငျသေးဘူး။ စားသောကျတာကို တားရုံနဲ့လဲ မရသေးဘူး။ ကနြျောတို့အနနေဲ့ ecosystem ဂဟေစံနဈတှကေိုလညျး ထိနျးသိမျးဖို့ လိုပါတယျ။ ဂဟေစနဈတှကေို ထိနျးသိမျးမှာ ဥပမာ တောကောငျက တောထဲမှာ နပွေီးတော့ လူတှကေ လူတှဘေကျခွမျးမှာ နမေယျ။ မဟုတျရငျ တောကောငျကနေ လူတှဘေကျကို ရောဂါတှေ ကူးသနျးလာနိုငျပါတယျ။
မေး ။ ။ ဆိုတော့ အဲဒါကို အမြားကွီး သတိထားရမှာပေါ့။ စောစောက လူတှကေို ကူးဖို့လို့ တဆငျ့တဆငျ့ ပွောငျးလာတယျဆိုတာကို နညျးနညျးလေး ရှငျးပွပေးပါ။ ဒီကိုရိုနာဗိုငျးရပျဈပိုးက ဘယျလိုမြိုး ကူးလာနိုငျတယျဆိုတာ။
ဖွေ ။ ။ အခု လောလောဆယျ ကိုရိုနာဗိုငျးရပျဈအရှမှေ့ာ ဖွဈသှားခဲ့တဲ့ SARS / MARS ဆားဈ၊ မားဈတို့မှာ လငျးနို့တှဆေီမှာ နဂိုကတညျးက ဗိုငျးရပျဈ မြိုးစုံ ရှိပွီးသား။ ကိုရိုနာဗိုငျးရပျဈအပွငျ တခွားဗိုငျးရပျဈတှလေညျး ရှိအုံးမယျ။ ဒါပမေယျ့ သူတို့ အနနေဲ့က သူတို့ကိုယျ သူတို့ ရောဂါ မဖွဈစဘေူး။ ဒါပမေဲ့ လငျးနို့တှကေို ဖမျးပွီးတော့ တောကောငျတှေ ရောငျးတဲ့ နရောတှမှော၊ လငျးနို့တှအေပွငျ တခွား တောကောငျတှေ ရှိမယျ။ အရငျ SARS ဆားဈ ကိစ်စမှာ အခု လောလောဆယျ အရှမှေ့ာ ဖွဈသှားတဲ့SARS / MARS ဆားဈ ရော မားဈရောက ပွောရရငျ၊ လငျးနို့တှမှောက နဂိုကတညျးက ဗိုငျးရပျဈ မြိုးစုံ ရှိပွီးသား။ ကိုရိုနာဗိုငျးရပျဈ အပွငျ တခွားဗိုငျးရပျဈတှလေညျး ရှိအုံးမယျ။ ဒါပမေယျ့ သူတို့ အနနေဲ့က သူတို့ကိုယျ သူတို့ ရောဂါမဖွဈစဘေူး။ ဒါပမေယျ့ တောကောငျတှေ ရောငျးတဲ့ နရောမှာ လငျးနို့အပွငျ တခွား တောကောငျတှေ ရှိမယျ။ ဥပမာ SARS ဆားဈ ကိစ်စမှာ ဆိုရငျ လငျးနို့ရယျ ကွောငျကတိုးတို့ကို ထားတယျ။ အဲဒီမှာ လငျးနို့တှကေ ဘယျလို ဖွဈသလဲဆိုတော့ ပုံမှနျအခြိနျမှာဆိုရငျ ဒီရောဂါတှကေို မပွနျ့ပှါးနိုငျဘူးဆိုပမေယျ့ သူတို့ကို လှောငျအိမျထဲမှာ လှောငျခြိုငျ့ထဲမှာ ထားတဲ့အခြိနျကရြငျ သူတို့က စိတျဖိစီးမှု အခု လောလောဆယျ အရှမှေ့ာ ဖွဈသှားတဲ့SARS / MARS ဆားဈ ရော မားဈရောက ပွောရရငျ၊ လငျးနို့တှမှောက နဂိုကတညျးက ဗိုငျးရပျဈ မြိုးစုံ ရှိပွီးသား။ ကိုရိုနာဗိုငျးရပျဈ အပွငျ တခွားဗိုငျးရပျဈတှလေညျး ရှိအုံးမယျ။ ဒါပမေယျ့ သူတို့ အနနေဲ့က သူတို့ကိုယျ သူတို့ ရောဂါမဖွဈစဘေူး။ ဒါပမေယျ့ တောကောငျတှေ ရောငျးတဲ့ နရောမှာ လငျးနို့အပွငျ တခွား တောကောငျတှေ ရှိမယျ။ ဥပမာ SARS ဆားဈ ကိစ်စမှာ ဆိုရငျ လငျးနို့ရယျ ကွောငျကတိုး ရယျကို ထားတယျ။ အဲဒီမှာ လငျးနို့တှကေ ဘယျလို ဖွဈသလဲ ဆိုတော့ ပုံမှနျအခြိနျမှာ ဆိုရငျ ဒီရောဂါ တှကေို မပွနျ့ပှါးနိုငျဘူး ဆိုပမေယျ့ သူက လှောငျအိမျထဲမှာ လှောငျခြိုငျ့ ထဲမှာ ထားတဲ့အခြိနျကရြငျ သူက stress အရမျးဖွဈတယျ။ အဲဒီလို stress ဖွဈတဲ့ အခြိနျကမြှ ဗိုငျးရပျဈတှကေ တခွားတှကေို ကူးရော၊ ဒီလို ကူးတဲ့အခြိနျမှာ ကွောငျကတိုးနား ထားမိရငျ ကွောငျကတိုးကို ကူးရော။ အဲဒီမှာ အဲဒီ ကွောငျကတိုးမှာလညျး သူ့ရဲ့ ဇီဝစံနဈ ရှိမယျ။ တိုကျထုတျနိုငျတာ ရှိသလို မတိုကျထုတျနိုငျတာလညျး ရှိမယျ။ အဲဒီလို ဖြားနတေဲ့ ကွောငျကတိုးကို ကနြျောတို့က စားမိတဲ့အခြိနျမှာ ကနြျောတို့ အဲဒီ SARS ဆားဈ ရောဂါကို စရတာပါ။ ဆိုတော့ သူတို့က ပုံမှနျ ကိုရိုနာဗိုငျးရပျဈတှေ ရှိနရောကနေ ဥပမာ လငျးနို့စားရငျ ဒီရောဂါ ဖွဈမလား လို့မေးရငျတော့ ဖွဈခငျြလညျး ဖွဈမယျ၊ မဖွဈခငျြလညျး မဖွဈဖူး။ ကနြျော အခုနက ပွောသလို သငျ့တျောတဲ့ အခြိနျ၊ သငျ့တျောတဲ့ နရော၊ သငျ့တျောတဲ့ ကွားလူ အကုနျလုံး အခြိနျကိုကျဖွဈဖို့လိုပါတယျ။
မေး ။ ။ ဆိုတော့ ဒီလိုမြိုး ရောဂါ တကမ်ဘာလုံး ကွုံနရေတဲ့ ကိုရိုနာဗိုငျးရပျဈရောဂါ မကူးစကျအောငျ အဓိက ဘယျလိုလုပျရမလဲ ပွောပွပေးပါ။
ဖွေ ။ ။ ကိုဗဈ-၁၉ အနနေဲ့က ရောဂါဆိုတာ စမဖွဈလာခငျကနေ ပွောရမယျဆိုရငျ ဒီရောဂါတှေ မဖွဈအောငျ ကနြျောတို့ လူတိုငျးအနနေဲ့ ဂဟေစနဈကို ထိနျးသိမျးဖို့၊ အစိုးရအနနေဲ့ ပွညျသူလူထုအနနေဲ့ ဝိုငျးဝနျးကူညီဖို့ လိုပါတယျ။ ဒါမှ အခု ကိုရိုနာဗိုငျးရပျဈက ဆေးထှကျလာပွီး ပွီသှားတယျဆိုပမေယျ့ ပွီးခဲ့တဲ့ ဆယျစုနှဈ၊ အခုနှဈဆယျကို ပွနျကွညျ့မယျဆိုရငျ ရောဂါအသဈအသဈတှေ ထပျထှကျလာတာ ဂဟေစနဈပကျြဆီးမှု၊ တောကောငျစားသုံးမှု ဒီလိုမြိုးစုံကနေ ရောဂါအသဈအသဈတှကေ ထပျထှကျလာတဲ့အတှကျ ဂဟေစနဈကို အဓိကထိနျးသိမျးဖို့ လိုပါလိမျ့မယျ။
ကိုရိုနားပိုးရှိမရှိ ဘယ်လိုဓာတ်ခွဲ အဖြေရှာ (အပိုင်း ၂)
Texas ပြည်နယ် မြန်မာတွေအလုပ်လုပ်တဲ့ အသားထုတ်စက်ရုံ COVID-19 ကူးစက်မှု